၎င်းတို့အားလုံးသည် Nexus စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည် Gadget သတင်း
စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်ဂူးဂဲလ်သည်မီဒီယာအားလုံးကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုသို့ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင် Nexus သစ်ကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဟုလူတိုင်းနီးပါးယူဆကြသည်၊ သူတို့၏တရားဝင်အမည်မှာယခုအချိန်အထိမသိရသေးသော်လည်းမည်သူသည်နှစ်ခြင်းခံမည်ဆိုသည်ကိုညွှန်ပြသည်။ Nexus 5X နှင့် Nexus 6P ကို ​​Huawei နှင့် LG မှထုတ်လုပ်သည်.
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဂူဂဲလ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးနှစ်သက်သည့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်လာစေရန်အတွက် developer များအတွက်အသုံးဝင်သောကိရိယာများမှအစပြုခဲ့သည်။
Nexus အသစ်ကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မှုနှင့်နီးကပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည် Google စျေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောစမတ်ဖုန်းအားလုံး၏သုံးသပ်ချက်Samsung, LG, HTC သို့မဟုတ် Motorola ကဲ့သို့သောအဓိကထုတ်လုပ်သူများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီစာရင်းထဲမှာ Nexus အားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ လာမယ့်သူနဲ့စက်တင်ဘာ ၂၉ မှာငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
2 Nexus S သည်
4 ကို Nexus 4
5 ကို Nexus 5
HTC သည် Nexus မိသားစု၏ပထမဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည် ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည်ယခုအချိန်တွင်အားနည်းနေသောအချိန်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Android တွင် HTC Dream နှင့်အတူပထမဆုံးသော terminal အဖြစ်သမိုင်းတွင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားအဓိကခဲ့ကြသည် Nexus One ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ:
မြင်ကွင်း: ၃၈.၇ လက်မ LCD အရွယ်အစားရှိပြီး 3,7x480 megapixels ရှိသည်
ပရိုဆက်ဆာ: Qualcomm Snapdragon QSD 8250 1 GHz
အန်းဒရွိုက် OS ကို 2.1
ယနေ့တွင်ဤသတ်မှတ်ချက်များသည်နိမ့်နိမ့်သောဆိပ်ကမ်းများစွာ၏ပင်များမဟုတ်သော်လည်းထိုအချိန်တွင်သူတို့သည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ Nexus One ဟာ Nexus ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ယနေ့ခေတ်မှာပထမဆုံးသောကျောက်တုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်။
Nexus မိသားစုဒုတိယအသင်းဝင်ဖြစ်သည် Nexus S ကို Samsung မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကမိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်တွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုစတင်နေရာယူခဲ့သောဂူဂဲလ်နှင့် Samsung တို့အကြားပထမဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။
၎င်း terminal သည် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Galaxy S ၏အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းမှာအနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်မကောင်းသောလက်ကိုင်ဖုန်းမဟုတ်သော်လည်းသုံးစွဲသူများအကြားစိတ် ၀ င်စားမှုသိပ်မရှိပါဘူး။ ဂူးဂဲလ်က၎င်းကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်လက်တဆုပ်စာတီထွင်သူများနှင့် "ရူးသွပ်သူများ" ၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ရှိနေခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ မရပေ။ ထိုအချိန်ကရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး၏တီထွင်မှုများကိုအလွန်တန်ဖိုးထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီနေရာတွင်သင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အနည်းငယ်ကိုပြပါမယ် Nexus S ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
၄ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်
Samsung Exynos 3110 (ARM Cortex A8) ပရိုဆက်ဆာ၊ 1 GHz
နောက်ကင်မရာ5megapixel
1.500 mAh ဘက်ထရီ
အန်းဒရွိုက် OS ကို 2.3
El galaxy Nexus ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးသော Nexus တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ယူထားသော Samsung အတွက်အဓိကအခိုက်အတန့်ရောက်ရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ Google နှင့်အထူးသဖြင့် Android အတွက် 2011 ခုနှစ်တွင်ထိုအချိန်ကစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ထိုနှစ်တွင်အောင်မြင်သော Galaxy S2 ကိုပြသခဲ့သည်။ Google က Nexus အသစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်သူကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Android 4.0 ဗားရှင်း Ice Cream Sandwich ဟုခေါ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေရောက်လာတယ်။
ဒီ Galaxy Nexus မှာအရင်ဒီဇိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြီးမားသော HD resolution ပါ ၀ င်သော screen ကိုပိုမိုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအားလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ၊ အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အားလုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးခဲ့သည်။
Galaxy Nexus ကသုံးစွဲသူများအားလုံးကိုအောက်ပါတို့ကိုပေးထားသည် အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ:
4,65 လက်မအရွယ် HD resolution ဖြင့် 1280 × 720 pixels ရှိသည်
ပရိုဆက်ဆာ: TI OMAP 4460 ARM Cortex-A9 dual-core 1,2 GHz
အတွင်းသိုလှောင်မှု - microSD ကဒ်များဖြင့် 16 သို့မဟုတ် 32 GB မချဲ့နိုင်ပါ
5 megapixel အနောက်ကင်မရာသည် autofocus ပါ ၀ င်ပြီး shutter lag မရှိပါ
ဘက်ထရီ: 1.750 mAh
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 4.0 Ice Cream Sandwich
ကို Nexus 4
LG သည်တစ်ဖန်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည် ကို Nexus4ဒီ terminal ကိုစျေးကွက်တစ်ခုလုံးနှင့်သုံးစွဲသူအမြောက်အများကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည်။ ဒီ terminal ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ Google ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေအားလုံးကိုမြင်ခဲ့တာပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။
အဓိကထုတ်လုပ်သူများသည်ပိုမိုစျေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုစတင်ထုတ်လုပ်ချိန်တွင် Google နဲ့ LG တို့ကသုံးစွဲသူအားလုံးကိုစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ယူမှတ်ယူရို ၃၀၀ အောက်မှာရှိတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် Nexus မိသားစု၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသည်အမြဲတမ်းကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည် Nexus4နှင့်၎င်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းအတွက်နှင့်အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Nexus ကိုမည်သို့တီထွင်ရမည်ကိုသိရှိထားသော LG ကိုပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်။ နီးပါးမည်သူမဆို၏လက်လှမ်းမမီ။
ဤသူတို့သည် ဒီ Nexus4၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ LG မှထုတ်လုပ်သည်။
၄.၇ လက်မဖန်သားပြင်၊ Corning Gorilla Glass 4.7 နှင့် ၇၆၈ × ၁၂၈၀ pixels (resolution2ppi) တွင်ရှိသည်။
ပရိုဆက်ဆာ: Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad Core 1.5 GHz
အတွင်းသိုလှောင်မှု - microSD ကဒ်များဖြင့် 8 သို့မဟုတ် 16 GB မချဲ့နိုင်ပါ
8 megapixel နောက်ကင်မရာနှင့် 1.3 megapixel ရှေ့ကင်မရာ
ဘက်ထရီ: 2.100 mAh
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 4.2 Jelly Bean
ကို Nexus 5
El ကို Nexus5ကျွန်တော်တို့အခုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တဲ့ Nexus4ကိုမမေ့ဘဲစျေးကွက်ထဲရောက်တဲ့သူတွေထဲမှာအကောင်းဆုံး Nexus ဖြစ်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း terminal ကို LG မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်ကိုရှင်းလင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Google သည်တောင်ကိုရီးယားမူရင်းကုမ္ပဏီကို Nexus အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်ထပ်မံယုံကြည်ခဲ့သည်။
Nexus5သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရာထောင်ချီသောသုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းကြီးများနှင့်အနည်းငယ်ကွာဝေးသော်လည်းဤဆိပ်ကမ်းများထဲမှအသုံးပြုသူများကိုကောင်းမွန်သောအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဤသူတို့သည် Nexus5၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ:
၄.၅၅ လက်မမျက်နှာပြင် resolution 4,95 x 1920 pixels (1080 ppi) Full HD True IPS
ပရိုဆက်ဆာ: 800 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Qualcomm Snapdragon ™ 2,3
ဘက်ထရီ: 2.300 mAh
Android 4.4 KitKat လည်ပတ်ရေးစနစ်
အကယ်၍ သင်ဟာအတိတ်ကခရီးတစ်ခုကိုသွားချင်ရင် (သို့) ဒီ Nexus5ဟာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်ရင်၊ Amazon ကနေတဆင့်သင်ဝယ်ယူလို့ရသေးတယ်။ ဒီမှာ.
El Nexus6ကို Motorola မှပြုလုပ်သည် ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်အတွက်နောက်ကျောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ပါသည့် phablet တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်မှုများပြားသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့် ၀ သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါရှိသည့်တိုင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများကိုမယုံကြည်ခဲ့ပေ။ ၎င်း၏ Nexus မိသားစုရှိအခြားဆိပ်ကမ်းများ၏ဈေးနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းစက်သည်၎င်း၏ယခင်အောင်မြင်သူများ၏အောင်မြင်မှုကိုမရရှိခဲ့ပါ။
အောက်မှာကြည့်ပါ ဒီ Nexus6၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ:
ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာ: Adreno 420 GPU သည် 600 Mhz တွင်ရှိသည်
ဤ Nexus ၏ပျက်ကွက်မှုသည်အချို့သောသုံးစွဲသူများခံစားခဲ့ရသည့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ဒီကိစ္စဟာအထူးပြုစတိုးဆိုင်အများစုမှာရောင်းနေတုန်းပါပဲ Amazon ကိုဝယ်ပါ မူရင်းတစ်အများကြီးလျှော့စျေးနှုန်းမှာ။
သင့်အတွက် Nexus စမတ်ဖုန်းမိသားစု၏အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဘယ်ဟာလဲ။။ ဤထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုရေးကွန်ယက်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင့်အားပေးနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ဤရွေ့ကားငါတို့ယနေ့အထိခံစားနိုင်ပါပြီ Nexus စမတ်ဖုန်းအားလုံးဖြစ်ကြသည်
စမတ်ဖုန်း ၆ လုံးဟာ iPhone 6S ထက်ပိုကောင်းပါတယ်၊